Pane Imwe Magazini Yandinobhadharira: Wired | Martech Zone
Shamwari dzangu dzinoziva kuti ndiri bhuku snob. Ndinoda mabhuku akaomarara. Iko hakuna chinhu senge kutsemuka kwemhandara musana uye kunhuwira kweprisiti peji ine nyowani inki pairi. Bhuku idzva rinonzwa richingonzwa sechipo kwandiri… uye nderangu, rangu rese!
Ndiri kushanda pane yangu hardcover snobbishness, zvakadaro! Ini handigone kubatsira asi kunzwa ndine mhosva pamabhuku ese ari kukomberedza imba yangu anokodzera kuverengerwa nevamwe vasingadi kukosora mutengo wekuvhara. Ndichasvika ikoko, ndinovimbisa. Muvhiki kana kupfuura, ndiri kuzoita makwikwi uye ndipe bhokisi rezvisingaverengeke zvakaomarara… vachiri mupurasitiki. Ramba uripo!
Zvisinei, chero sekuda kwandinoita kunzwa kwepepa, ndakarega kuverenga mapepanhau makore apfuura. Ndanga ndichitaura na John Ketzenberger, mutori wenhau we Star Star (pun yaida) nezvazvo vhiki kana apfuura. Ndakarega kutenga bepanhau apo utapi venhau hwachinja kubva pachigadzirwa kuenda pakuzadza pakati pezviziviso.
Ndakarega kutenga mapepanhau apo mapepanhau akatanga kushambadza kuti mangani maponi aive nemusi weSvondo pachinzvimbo chekuti vange vaburitsa nyaya ngani dzenhau. Zvichiri kundishungurudza. Dai zvaive zvisiri zvekoramu yaJohn, handina chokwadi chekuti ndingadai ndakatomboverenga Iyo Indianapolis Star pamhepo, chero.
Pachine bhuku rimwe chete rokudhinda randisingagoni kumirira kuti rivhurike uye rivhure, kunyange… uye ndizvo Wired Magazini. Ndakamira kunyorera makore apfuura pavakachinjira kumifananidzo mikuru, kudhinda kudiki… asi makore mashoma apfuura anga achishamisa. Hapasisina hunyanzvi fluff - chinyorwa chega chega chinotenderera peji. Kune mashoma kwazvo edhisheni andisingadye kubva pabutiro kusvika pabutiro. Ndakaverenga zvekare gore rapfuura uye ndikatoona ini blog pamusoro peWired zvinyorwa kamwe chete pamwedzi miviri kusvika mitatu.
Iyi Mwedzi Wired Magazini:
Mukati meiyo GPS Shanduko: Maitiro gumi Anogonesa Kwazvo Kwenzvimbo
Iyo Wired Presidency: Inogona here Obama Kudzoreredza iyo White House?
Zano Rokuuraya Google
DIY DNA: Imwe Yababa Kuedza Kubira Mwanasikana Wake Genetic Code
Rima Ishe reBroadband Inoedza Kugadzirisa Mufananidzo waComcast
Sezvo zvinyorwa izvi zvave online, ndingakupokana nazvo kuti uverenge zvinyorwa izvi. Kana zuva rako rizere nekuverenga mablog blog uye uri mumwe wevanhu vanoshamisika kuti sei tichidazve vatori venhau, chero chimwe chezvinyorwa izvi chinofanira kuchinja pfungwa. Kuchengetwa nekunyora kunoiswa mune yega yega yezvinyorwa izvi zvinosvetuka kubva papeji… er… screen.
Pandinofunga nezvekuti ndinobhadhara zvakadii bhuku rakanaka rine butiro, uye kuti Wired Magazine inodhura zvakadii - ndinoshamisika kuti sei ndisingabhadhare yakawanda yekunyorera kwangu. Iko hakuna kana imwe yemagazini pamusika inotora pfungwa dzangu uye inoshuma zvakanyanya pasekinoroji chikamu pamwe neWired.
Ini handikwanise kumirira kusvika mwedzi unotevera Wired!
Tags: kutenga maitironzira yekutaurirana
Ini pachangu ndinoda Wired asi ndave nehukama zvakare. Ndiri kuverenga izvozvi.
Wired ndiyo yega yandakaramba nayo. Ini ndiri mutambi zvakadaro uye ndakawana Game Informer mumakore maviri apfuura kana zvakadaro, asi izvo chete nekuti zvinouya neiyo Game Stop discount kadhi.
Vaverengi venguva dzose veblog redu (www.inmedialog.com) vanozoziva kuti isu tiri vatsigiri vane shungu dzekunaka mukutora nhau zvisinei nefomati. Ndinonzwira tsitsi avo vanofanira kutambura nebepanhau rezuva nezuva remudhorobha rechipiri kana rechitatu; ndizvo zvazviri muno muOttawa, Canada, uko rag yemuno inyaya yakashata yemakambani emidhiya midhiya achimhanya kusvika pasi.
Tine rombo rakanaka, zvisinei, nekuti tine bepanhau rezuva nezuva renyika, Globe and Mail, rinouya pamusuwo wangu mangwanani ega ega. Zvave kumberi-kumashure-kumashure kunodiwa kuverenga muhupenyu hwangu kweanopfuura makore makumi maviri neshanu zvazvave zviripo. Inomira serimwe remapepanhau akanakisa emutauro weChirungu pasi rose.
Kuverenga Globe zuva rega rega kunondisiya ndiine nguva yakawanda yemamwe mapejitori sekuzvireurura kwako kwekupindwa muropa, Douglas, asi ini ndinogovera rudo rwako kune Wired. Yakave yangu nhamba yekutanga tekinoroji magazini kubvira Bhizinesi 2.0 yakaenda pasi. (Unogona kuverenga obit yangu ye2.0 pano: http://inmedialog.com/index.php/archives/a-business-20-titan-bows-out/) Iine zvakawanda zvegadget-and-geek zvinhu uye zvishoma zvebhizimisi kurova kwairi kupfuura 2.0, asi kunyora kwacho kwakakosha, maitiro acho anowanzo tsvakurudzwa uye anofunga uye nenguva yandinenge ndapedza nayo, imwe neimwe. nyaya ine akati wandei mapeji makona akadzokera kumashure kundiyeuchidza kuti nditarise mberi mune chero zvakanyorwa pamusoro peiyo peji.
Isu tinowana akawanda emagazini anounzwa kune yedu tech-yakatarisana nePR agency svondo rega rega; Wired ndiyo chete tsvimbo inorairwa inofanira kuiswa padhesiki rangu kana yangosvika.
Jan 29, 2009 na12:24 PM
Ndakasvika pakushanda neThe Globe neMail angangoita makore mashanu kana matanhatu apfuura uye ndinobvumirana nekuongorora kwako. The Globe, panguva iyoyo, yainetsekana zvikuru nezvekusvika vateereri vakarurama... kwete kungosvika chero angatenga bepa. Vakadzivisawo kuderedzwa - zvese izvi zvakapa bepanhau kukosha kwakawanda kunoonekwa. The Globe and Mail inogona kudarika Wall Street Journal sebepanhau rebhizimusi repamusoro pasi rose. Ibepa guru uye sangano guru!